Vakwegura Masherufu Akafanogadzirirwa Kambani uye LLC Zvemutemo Zvinodzora
Sanganisirwa pakarepo nemakore ekunyora nhoroondo. Bhurawuza huwandu hukuru hwepasi rose hwe "pre-filed" akwegura masherufu emakambani nemakambani ari kutengeswa. Ese mabhizinesi masangano akamira zvakanaka kuburikidza nekugadzirisa, kudzoreredza kana zvakaenzana. Iro zita rebhizinesi rinogona kushandurwa pamari shoma.
Vakwegura Shelf Kambani uye LLC Disclaimers
Sezvatakataura muchikamu chino, kana uchishanda "shefu" kana "vakura" mubatanidzwa kana LLC tinokurudzira kutendeseka, kuvimbika uye kuburitswa zvizere maererano nezuva rawakatora chinzvimbo. Chinhu chakadai hachigone kuwedzera muridzi kugona kubhadhara pazvibvumirano zvehurumende. Zvinogona kusapa varidzi kuwana nyore kiredhiti sezvo paine zvinhu zvakawanda zvinofungwa nemukweretesi asati awedzera chikwereti. Zvinhu zvinosanganisira, asi zvingangogumira kune, mari yekambani, iyo purofiti yekambani, kukweretesa kwekambani uye pamwe neyavakuru. Vakweretesi vanowanzo tarisa zvinhu zvinochengetedza chikwereti. Nekudaro, zera rekambani handiyo yega chinhu uye haifanire kutariswa sechinhu chikuru mukukweretesa bhizinesi.
Kana zera reiyo akwegura masherufu mubatanidzwa inopa varidzi kugona nyore kuwana mari yekudyira, inogona kunge iri chinhu chidiki, kana zvachose. Zvinhu zvine huremu hwakanyanya hunowanzove chiitiko chevashandi vakakosha uye chirongwa chebhizinesi chine mutsindo pamwe nekugona kwevatungamiriri kunyatsotaurirana uye nekupa rutsigiro mukugona kwechirongwa.
Nyanzvi ine hunyanzvi iri mubhizinesi rekutora makambani kuruzhinji yakatizivisa kuti inosarudza kushandisa akwegura masherufu emakambani kwete zvinhu zvitsva. Nekudaro, iyi inyaya yemafungiro chete uye inogona kana inogona kusabatsira mune ese mamiriro kune wese munhu. Saka isu tinokurudzira kutsvaga gweta repamutemo pane izvi nezvimwe zvinokurukurwa pano. Iko kune yakasimba Securities uye Exchange Commission uye State Securities mirau uye mafirita anodikanwa maererano nemakambani eruzhinji uye iwo haatariswe do-it-zvako zvirongwa. Zvakangwara kuve nemagweta ane ruzivo anotungamira maitiro eruzhinji. Kambani yakura yega inogona kusapa varidzi kuwana mikana yekudyara, kana sezvakakurukurwa pamusoro, inogona kusapa mashoma mashoma kana uchinyorera chikwereti chekambani.
Iwo akwegura masherufu emakambani uye maAdvs pano anosanganisira zvinyorwa zvekubatanidzwa kana zvinyorwa zvesangano uye kitikiti chekambani. Iyo kitiki yemubatanidzwa inouya yakajairwa nenzvimbo yekuchengetera marekodhi ekambani, maminetsi asina chinhu emisangano, akajairwa seti yemuenzaniso emakambani emitemo, isina chinhu uye isina kuvharwa zvitupa zvemasheya kana zvitupa zvehunhengo. Iyo inogona kana inogona kunge isina iripo federal mutero ID nhamba. Isu tinosimbisa kuti makambani ari muhombodo yavo isu hatisi kutengesa masheya kana zvimwe kuchengetedzeka. Ivo vanofanirwa chete kushandiswa kune zvemutemo zvinangwa.
Mabhangi uye vamwe vazhinji vanokweretesa zvinoda humbowo hwekuti kambani yakanyatsoita bhizinesi uye inobatsira uye ine chikwereti isati yapa kiredhiti, kwete kungoti kambani yanga iripo kweimwe nhamba yemakore. Sezvambotaurwa pamusoro apa, kutora kambani kubva pachivande chinzvimbo, kunzvimbo yekutengesa pachena kunoda zvinopfuura izvo kuti mubatanidzwa wakabatanidzwa kwenguva yakati. In inosanganisira kusefa uye zvimwe zvinodiwa zvinofanirwa kubvumidzwa nemadhipatimendi ehurumende nematare anotonga. Kambani isina nhoroondo yebhizinesi haigone, mukati mawo, kukwanisa kuwana zvibvumirano zvehurumende nyore nyore nekuda kwekuti yanga iriko kwenguva yakati.
Hapana chinhu apa chingatariswe sechibvumirano chekutengesa kuchengetedzeka mudunhu reNevada kana chero imwe nyika kana nyika. Iko hakuna kutengesa kana kupihwa chero chipi chinyorwa, sitoko, bond, chikwereti, humbowo hwechikwereti, chitupa chekufarira kana kutora chikamu muchibvumirano chekugovana-purofiti, chikamu chakabatana chekudyidzana, kufarira mune yakashomeka-mutoro kambani, chibatiso-trust chitupa, gadziriro yekurongedzerwa kana kunyoreswa, mugove unodzoreka, chibvumirano chekudyara, vatical settlement investment, voting-trust chitupa, gwaro redhipoziti rekuchengetedzwa, chidimbu chisina kukamurwa kufarira muoiri, gasi kana imwe mineral lease kana kubhadhara kubva mukugadzirwa kweakadai kubhadhara, kurudyi kana kwemadzishe, kuisa, kufona, kukanda kana sarudzo pane chengetedzo, gwaro redhipoziti kana boka kana indekisi yemasecurity anosanganisira chero kufarira mariri kana zvichibva pakukosha kwechero zvataurwa, kana, kazhinji, chero kufarira kana chiridzwa chinowanzozivikanwa sekuchengetedzwa kana chero chitupa chekufarira kana kutora chikamu, chechinguva kana chemberi chitupa che, risiti ye, yakazara kana chikamu chevimbiso kana warandi kana kurudyikunyorera kana kutenga chero zvambotaurwa sezvakatsanangurwa muNRS 90.295.